अमेरिकामा क्रेडीट बनाउने ५ उत्तम उपायहरु - Enepalese.com
सानुबाबु सिल्वाल २०७५ चैत ३० गते १९:१२ मा प्रकाशित
सानुबाबु सिल्वाल,तपाई नया हुनुहुन्छ अमेरिकामा। भर्खरै आउनु भ​एको छ अर्थात भर्खरै कानुनि कागज बनेको छ​। क्यास अर्थात नगदमा मात्रै तनाखा बुझिरहनु भ​एको छ​। बैङ्क खाता र डेबिट कार्ड त छ तर क्रेडीट कार्ड छैन​। गाडी किन्न मन लागेर आयो अर्थात गाडी किन्नु पर्ने भयो। भाडामा एपार्टमेन्टमा बस्दा बस्दै आफ्नै घर किन्ने सुर चल्यो। कुनै सामान उधारोमा किन्नु पर्यो, आफुसङ्ग साथमा भ​एको रकमले पुगेन​। आफ्नै ब्यबसाय किन्ने सुर चल्यो, सिड मनि त छ तर अपुग छ, पुर्ण ब्यबसायका खरिदमा नपुग रकम उधारो लिनु पर्यो क्रेडीट कार्डबाट वा अन्य बैङ्किङ बित्तिय सस्थाहरुबाट? तर के गर्ने माथिका यि सबै काम सम्पन्न गर्न, भ​एको इच्छा र योजना पुरा गर्न स्रोत र साधन जुटाउन नसक्दा वा आफुसङ्ग भ​एको रकम नपुग भै उक्त अपुग डलर जोरजाम गर्न सकस पर्दा क्रेडिट कार्ड वा अन्य फाइनान्सियल सस्थाबाट उधारो रकम लिनु पर्ने हुन्छ तर के गर्ने?
१) सुरक्षित क्रेडीट कार्ड लिने।
२)लेन्डरबाट क्रेडीट निर्माणका लागि ऋण लिने।
३) आधिकारिक एबम एक्जिस्टिङ्ग उपयोगकर्ताको क्रेडीट कार्ड एकाउण्टमै सम्लग्न गर्ने।
४) सपिङ्ग महल​, वालमार्ट​, स्याम्स क्लब वा सपिङ्ग कम्पनि जस्तै एमाजोन जस्ता कम्पनिको साधारण र न्युन मुल्य बराबरको क्रेडीट कार्ड आबेदन दिने।
५) युटिलिटी आफ्नो नामबाट लिने।
युटिलिटी बिल जस्तै सेल फोन​, बत्ति बिजुलि पानि, एपार्टमेन्ट सकेसम्म आफ्नो नाममा वा आफन्त वा नजिकका भाइसाथिको नाममा भ​ए कोसानर बस्दा पनि तपाइको क्रेडीट शुरुवात हुन सक्दछ​। तर यो प्रक्रिया स्लो मोसन हो।